Omunye imisebenzi bezijabulisa kunazo, okuyinto ngokuvamile iba wokuzilibazisa ozithandayo - it is ijezi. Lokhu lwaya odabule eminyaka amaningi kangaka, ke ithathe ukunambitheka kanye ikhono zezizwe ezihlukahlukene hhayi ngaphansi ezifunwayo ezakha kakhulu ezweni lanamuhla. Uma uqala ukufunda izifundo ijezi Wabasaqalayo, kulesi sihloko kuzokusiza.
Ngisho nanamuhla, ezihambisana ngezandla zakhe into kuyoba isipho ephelele emndenini nakubangane. Ngokwesibonelo, amasokisi kanye isikhafu yasekuqaleni. Futhi uyobheka kuphela, wesibili izinto ezinjalo ngeke ukuthole. Ngesikhathi knitters ekuqaleni unemibuzo eminingi, futhi omunye ezivamile: "Indlela baqede ukunitha?"
Ukwaluka kuyikhono - ngubani balukhulume hhayi kuphela abesifazane kodwa futhi amadoda. Ngaphandle kweqiniso lokuthi kwabathile nenza umsebenzi ewusizo futhi into obumbene enhle onayo futhi uphumule, lingazi nokwazi ukuthi. Ukuze ungenele isimo ibhalansi ezolile, udinga ukuthatha ukunitha futhi bachithe kusihlwa esihlalweni sakho ozithandayo.
Lapha sizothola babonise indlela ukuqedela ukunitha. Lokhu kumele kwenziwe uma udinga ukuqedela, knitwear kanye wakhuluma okuningi izihibe ukuthi kufanele ivalwe. Ukuvala iluphu, uzodinga, isibonelo, ephaketheni, ehlombe noma neckline wotho.
Izindlela kanjani ukuqedela ukunitha, kukhona ezimbalwa: Ukusebenzisa ukukhilosha hook, kusetshenziswa inaliti kanye Stitch obumbene, kodwa namuhla sikhuluma indlela elula ukuthi akudingi namanye amakhono. Ngenxa yalesi sisebenzisa izinaliti futhi loops njalo sigqoke komunye nomunye.
Isinyathelo 1. spokes ukunitha kudingeke uthathe isandla sokhohlo, uthulule ku ilungelo. Ukusebenza ngentambo kufanele kube ukunitha, njengasezulwini ijezi phambili kobuso.
Isinyathelo 2: Eyokuqala izihibe ezimbili kufanele obumbene.
Isinyathelo 3. Faka inaliti kwesokunxele kusuka kwesokunxele kuya kwesokudla in the front odongeni wazi inaliti kwesokudla. Kuzokwenza iluphu ayengayicabangi ekuqaleni spokes kwesokudla. Bhekisisa izithombe izobonwa, njengoba kufanele kube.
Isinyathelo 4. inaliti Kwesokunxele ngentambo iluphu phezu yesibili futhi kamuva spokes sakhe sokunene. Ngakho-ke enye iluphu yavalwa, kanti eyesibili langakwesobunxele kwesokudla wakhuluma.
Isinyathelo 5. Landela iluphu isidingo obumbene.
Isinyathelo 6. Phinda zonke lezi zinyathelo ukuze phezulu uze uvale zonke izihibe etholakalayo. On the spokes sangakwesokudla, uyobe uzipha esinye iluphu. ngentambo Ukusebenza ukuba usike, ushiya ichopho 10 cm, awelulele ke kumjikelezo odlule. Donsela ekupheleni intambo qinisa kahle ngesihibe.
A iseluleko kancane: uma uzama iphethini spokes Wabasaqalayo kanye nesidingo ukuvala loop ngokuhambisana iphethini, ngamanye amazwi, ebusweni - izihibe nokushukuma purl - purl. Isikhathi esining impela, imfundamakhwela amateur izihibe eduze obumbene kuqinile kakhulu, futhi lolu chungechunge yakamuva ematfuba inelastic. Ukuze ugweme lokhu, thatha omunye inaliti sinye emikhulu.
Mhlawumbe indlela ukuqedela ukunitha, ungenawo bathande, zama ukuvala ukunitha usebenzisa ukukhilosha hook, futhi lapho ukhululekile e ukunitha, zama ukunitha Stitch kubo ozoyisebenzisa kaningi. Kodwa lokho kungenye indaba.
Ukukhilosha. "Isinyathelo Rachy" ngoba umklamo womkhiqizo onqenqemeni
Silicone unamathisele - umsizi ngemisebenzi
Glue isibhamu - ithuluzi esisemqoka ngenalithi
Iqanda amagobolondo njengoba umthombo calcium. Indlela ukupheka igobolondo amaqanda deku calcium
Amway. Ukubuyekeza komkhiqizo
Indlela isigqoko kwesiteshi sakho se-YouTube?
Iphutha 504: zonke enemininingwane futhi isixazululo
Eshibhile Ucingo: Izibuyekezo inthanethi zikagesi
Amaqanda Artificial - kungenzeka?
Isiqu Brachiocephalic: umqondo and definition